FUNDA NGOLUNYE ULWIMI Cakchiquel (Western) IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla YaseVenezuela Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBolivia Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseHungary Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseKorea Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseOstreliya Intetho Yezandla yaseParaguay Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yasePoland Intetho Yezandla yaseQuebec Intetho Yezandla yaseRashiya Isi-Iban Isi-Ibanag Isi-Ibinda Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Irish Isi-Isoko Isi-Itali IsiAbbey IsiAbkhaz IsiAbui IsiAcholi IsiAlbania IsiAlur IsiArabhu IsiArmenia IsiAssamese IsiAttié IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBambara IsiBaoule IsiBashkir IsiBasque IsiBassa (saseCameroon) IsiBatak (SaseKaro) IsiBatak (SaseSimalungun) IsiBatak (SaseToba) IsiBelize Kriol IsiBengali IsiBhulu IsiBiak IsiBicol IsiBislama IsiBoulou IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiChol IsiChuukese IsiChuvash IsiCibemba IsiCinamwanga IsiCinyanja IsiCreole SaseBissau Guinea IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDamara IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDayak Ngaju IsiDigor IsiDrehu IsiEdo IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFaroese IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGalician IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiGuéré IsiHausa IsiHebhere IsiHerero IsiHiligaynon IsiHindi IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiJula IsiKabuverdianu IsiKabyle IsiKachin IsiKannada IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKekchi IsiKhana IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKipende IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKonkani (saseRoman) IsiKorea IsiKosrae IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLamba IsiLatvia IsiLenje IsiLhukonzo IsiLingala IsiLithuania IsiLomwe IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiMacua IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMapudungun IsiMarathi IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMixe IsiMizo IsiMongolia IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNavajo IsiNdau IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgangela IsiNgesi IsiNias IsiNigerian Pidgin IsiNorway IsiNyaneka IsiNyungwe IsiNzema IsiOkpe IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiOtomi (SaseMezquital Valley) IsiPalau IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPidgin (SaseCameroon) IsiPolish IsiPonapea IsiPunjabi IsiPunjabi (SaseShahmukhi) IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiQuiche IsiQuichua (SaseChimborazo) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiRashiya IsiRomania IsiRomany (Macedonia) Cyrillic IsiRomany (SaseSouthern Greece) IsiRomany (saseMacedonia) IsiRotuman IsiRunyankore IsiRutoro IsiSamoa IsiSangir IsiSango IsiSena IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSunda IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTamil IsiTandroy IsiTarascan IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTongan IsiToraja IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTshwa IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUighur (sesiCyrillic) IsiUkrainian IsiUrdu IsiUrhobo IsiUruund IsiUzbek IsiValencian IsiVezo IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWelsh IsiWolaita IsiXhosa IsiYacouba IsiYoruba IsiZande IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu isi-Igbo isiGokana isiWallisian isiZapotec (saseIsthmus)
Xa uzivuma iimpazamo zakho uya kujongwa njengomntu okhathalayo nothembekileyo.
Khawucinge ngoku: UTim udlala ibhola neetshomi zakhe aze aphule iglasi yefestile yommelwane.
Ukuba ubunguTim, ubuza kuthini?
UNOKWENZA ENYE YEZI ZINTO:
Unokuxelela ummelwane into oyenzileyo uze umthembise ukuba uza kuwulungisa umonakalo.
Usenokufuna ukwenza uA. Kodwa kusoloko kukuhle ukuzivuma iimpazamo zakho—enoba waphule iglasi yefestile okanye kuyo nantoni na oyenzileyo.
IZIZATHU EZITHATHU ZOKUBALULEKA KOKUZIVUMA IIMPAZAMO ZAKHO
Yeyona nto ilungileyo.
Abantu badla ngokubaxolela abantu abavumayo xa benze impazamo.
IBhayibhile ithi: “Okugubungelayo ukunxaxha kwakhe akayi kuphumelela, kodwa okuvumayo aze akushiye uya kwenzelwa inceba.”—IMizekeliso 28:13.
Eyona nto ibalulekileyo, uThixo uyamthanda umntu okwenzayo oko.
IBhayibhile ithi: “Umntu otenxayo uyinto ecekisekayo kuYehova, kodwa ukusondelelana naye kokwabo bathe tye.”—IMizekeliso 3:32.
UKarina, ona-20, wazama ukulifihla kutata wakhe itikiti awalifumana ngenxa yokuqhuba ngesantya esiphezulu. Kodwa akazange akwazi ukulifihla ngokupheleleyo. Uthi, “Emva konyaka, utata wabhaqa itikiti lokubalekisa eliphume ngegama lam. Ndaba sengxakini enkulu!”
Isifundo? UKarina uthi: “Ukuzifihla iimpazamo kwenza imeko ibe mbi nangakumbi. Uyaphendula ngazo ekugqibeleni!”
UKUFUNDA KWIIMPAZAMO ZAKHO
IBhayibhile ithi: “Sonke siyakhubeka [okanye, senza iimpazamo] izihlandlo ezininzi.” (Yakobi 3:2) Njengoko sele sibonile, ukuvuma iimpazamo kubonisa ukuba sithobekile yaye sikhulile—sifanele sizivume ngoko nangoko.
Enye into ufanele ufunde kwiimpazamo zakho. Enye intombazana enguVera ithi: “Ndizama ukufunda kwiimpazamo zam ngokuthi ndikhangele ukuba bendinokuziphepha njani, ukuze ndenze bhetele kwixesha elizayo.” Masijonge indlela onokukwenza ngayo oku.
Uboleka isithuthuthu kutata wakho uze usimoshe. Uza kuthini?
Akuzothetha nto ngethemba lokuba utata wakho akasoze asibhaqe.
Uza kuxelela utata wakho oko ukwenzileyo.
Uza kuxelela utata wakho oko kwenzekileyo kodwa utyhole omnye umntu.
Utshone iimviwo ngenxa yokuba khange ufunde. Uza kuthini?
Uza kuthi bezinzima iimviwo.
Uza kuvuma ukuba nguwe oye wabangela ukuba utshone.
Uza kuthi utitshala wakho akakuthandi.
Ukuhlala ucinga ngeempazamo ozenze kwixa elidlulileyo kufana nokujonga isipili esikubonisa ngasemva ngoxa uqhuba imoto
Jonga le mizekelo isekuqaleni uze uzithelekelele (1) ungutata wakho (2) notitshala wakho. Baza kucinga ntoni ngawe utata notitshala wakho xa uzivuma ngoko nangoko iimpazamo zakho? Baza kucinga ntoni ngawe ukuba uyazifihla iimpazamo zakho?
Cinga ngempazamo obuyenze kulo nyaka uphelileyo uze uphendule le mibuzo ilandelayo.
Yayiyintoni loo mpazamo? Wathini emva kokuba uyenzile?
Ndatyhola omnye umntu.
Ndayivuma ngoko nangoko.
Ukuba zange uvume ukuba wenze impazamo, waziva njani emva koko?
Yintoni obunokuyenza bhetele?
Wafunda ntoni kuloo mpazamo?
Kutheni abanye abantu bengazivumi iimpazamo zabo?
Yintoni abaza kuyicinga abantu ngawe xa usoloko uzithethelela, kodwa baza kucinga ntoni xa uzivuma iimpazamo zakho?—Luka 16:10.
Kwiinyanga eziyi-12 ezizayo, yintoni oza kuyenza xa uphazamile?